Midab beddelidda 9 inji Jeep wrangler jl rgb led halo headlights, waxay la timid 100w 6500lm dogob sare, 30w 1000lm dogob hoose iyo 22w DRL halo cad. Ku habboon 2018 + Jeep Wrangler jl, DOT SAE Emark-9 waa la ansixiyay.
Kani waa nambarkii ugu dambeeyay ee aan hogaamino rgb Jeep wrangler JL 2018+. Nalalka hore ee nalalka waxaa loogu talagalay inay noqdaan kuwo aan boodh lahayn, miridhku qaban karin iyo biyo la’aan. Nalalka halo ee dhalaalaya ee loogu talagalay Jeep Wrangler jl, la imow isku xiraha H4 iyo adabtarada H13. Naqshad gaar loo leeyahay oo ay soo saartay Morsun Technology, ayaa ku habboon Jeep Wrangler JL 2018+ aan lahayn qaansooyin. Naqshad gaar ah, UV u adkaysata, tamarta hufan, keydinta tamarta iyo ilaalinta deegaanka, biyuhu, boodhka ka hortagaan, ka hortagga qarxa. Cimri dheer, cimri dheer in ka badan 50000 saacadood.
faahfaahinta of Jeep Wrangler JL RGB Nalalka hore
Tilmaamaha 9 inch RGB Halo Lights for Jeep Wrangler JL